Swarmify: Ebumnuche Anọ Iji Jiri Ememme YouTube Na Business Gị Weebụ Weebụ | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 28, 2021 Bọchị Sọnde, Machị 28, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere vidiyo vidiyo ndị ị jirila ọtụtụ puku dollar, ị kwesịrị ị na-ebipụta vidiyo na YouTube iji rite uru na nsonaazụ ọchụchọ YouTube…. dị nnọọ ijide n'aka na ị ebuli gị YouTube vidiyo mgbe ị na-eme. Nke ahụ kwuru, ịkwesighi itinye vidiyo YouTube na saịtị gị… maka ọtụtụ ihe kpatara ya:
YouTube na-enyocha ojiji nke vidiyo ndị ahụ ezubere iche mgbasa ozi. Kedu ihe kpatara ị ga - eji chọọ ịkekọrịta ebumnuche ndị ọbịa gị na Google ka ha nwee ike ịkwalite mgbasa ozi maka ndị asọmpi gị?
Ọ gwụla ma i chefuru, ikekwe ị na-apụ vidiyo dị mkpa nke ndị asọmpi gị na ihe ọkpụkpọ YouTube gị! Were ya na ịga na saịtị gị, na-ele vidio gị, emesia egosiputara onye na-asọmpi vidiyo gị dị ka ihe ọzọ dị mkpa. Chei!
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, YouTube bụ n'ezie dị nwayọọ na vidiyo anaghị ebido mgbe ụfọdụ dịka vidiyo na-echekwa. Hey… ọ bụ n'efu, nri? Ọfọn… ọ bụghị maka azụmaahịa na-achọ imechi onye ahịa ọ bụghị. Enwere ụgwọ ị ga-agba na ịntanetị.
Egwuregwu vidio YouTube adịghị oke customizable… Mara vidiyo a n'okpuru ebe m nwere nhọrọ ole na ole ịhọrọ site na… na-ekiri na YouTube, pịa njikọ iji mepee na YouTube, Lelee mgbe e mesịrị na YouTube, Kekọrịta, ma ọ bụ pịa egwu. Emere ya niile maka YouTube kama akara gị. Kedu ihe kpatara na ọ bụghị naanị onye ọkpụkpọ na - enweghị ọrụ ma na - arụ ọrụ?
Enwere m ike ịdụ gị ọdụ ka ị zere vidiyo nnabata na saịtị nke gị. Lọ ọrụ weebụ gị na-ahụkarị enweghị akụrụngwa iji mee ka ike gwụ ọtụtụ puku ndị ọbịa. N'ezie, enwere ezigbo ohere na ị ga-agabiga n'ọnụ ụzọ mbata ma gbaa gị ụgwọ karịa. Chọrọ n'ezie onye na-elekọta vidiyo… ọ bụghị YouTube.
Chere nke abụọ, ị kwuo… Doug… gị mgbe niile Embed YouTube vidiyo na saịtị gị. Ọfọn, ndị bekee, nke a bụ mbipụta… ọ bụghị saịtị azụmahịa. Enwere m mmasị na itinye vidiyo na YouTube ka ndị okike wee nweta echiche na ohere ndị folks ịchọta ma denye aha ha. Mgbe m nwere ụfọdụ vidiyo vidiyo emere maka azụmaahịa m, aga m anabata ha na ya Na-agbasa.
N’ezie, e nwere ihe ọzọ dị iche… ị bụ YouTuber!
Swarmify SmartVideo: Nbudata vidiyo ngwa ngwa
Swarmify na-enye ngwọta ngwanrọ vidiyo siri ike na ngwa ngwa maka weebụsaịtị gị. A bụ ihe nnyocha video:
Na-agbasa awade ụfọdụ ịrịba atụmatụ:
CDN - Ha nwere uwa netwọk nnyefe ọdịnaya (CDN), nke pụtara na ọ bụ obere oge dị n’etiti onye na-arịọ vidiyo na ebe a na-ekesa ya.
Echekwa-Free playback - SmartVideo jiri Swarmify na patent na-echere nnyefe, na-ebelata nnukwu ọpụpụ site na 8x.
Na-aga n'ihu njikarịcha Video gụgharia - N’ime egwuregwu ọ bụla, SmartVideo na-enyocha ahụmịhe vidiyo nke onye ọrụ ọ bụla ma gbochie ọdịda tupu ha emee.
Nbudata ngwaọrụ - Ọbịa nweta video kachasị maka ngwaọrụ ha iji nyefee ahụmịhe kachasị mma. Na-echegbu onwe-na akpaghị aka emelitere maka ọhụrụ ngwaọrụ.
Ọcha, Egwuregwu-Free Player - Mee ahịa ndị ọzọ, ma belata ọnụego bounce site na ime ka ndị ọbịa lekwasịrị anya na akara gị. Ezubere logos na vidiyo ndị metụtara ya iji wepụ ndị ahịa gị.
WordPress Nkwụnye - Enweghị mkpa iji ọgbaghara na ederede, SmartVideo nwere ngwa mgbakwunye iji bulie gị ma na-agba ọsọ ọsọ.
Ịnye ọnụahịa - Ekwesighi ịta gị ahụhụ maka ijere ọdịnaya dị elu na saịtị gị. Ọ bụ ya mere ịgba ụgwọ SmartVideo anaghị adabere na bandwit, naanị echiche vidiyo.
A bụ ihe atụ-na-n'akụkụ tụnyere nke ọsọ:
Ọ bụrụ na nke ahụ ezughi, SmartVideo na - ewepụta vidiyo gị na YouTube na - akpaghị aka ma debe ha. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-edochi ihe ọkpụkpọ YouTube kpamkpam ma na-akwado vidiyo gị na netwọkụ nnyefe zuru ụwa ọnụ anyị ma na-eje ozi site na teknụzụ egwu egwu anyị.
Bido na Swarmify
Ngosi: Abụ m mmekọ maka Gbanwee SmartVideo.
Tags: igbochiazụmahịa vidiyo nnabataụlọọrụ video hostingngwa ngwa nnabata vidiyosmartvideogbasaavidiyo cdnvideo encodingonye nnabata vidiyovideo hostingwordpress pluginYouTube ọzọ